I-SPC floor VS floor floor - Isazi seZD Floor
Ikhaya > I-SPC floor VS floor floor
Hlela: UDenny　2020-04-09　Iselula
Luhlobo olusha lwezinto ezibonakalayo ezisezingeni eliphansi ezithandwa e-Europe naseMelika, ezenziwe ngama-nano-molecule, anobungani bemvelo futhi akadingi glue noma mpande ukuxazulula inkinga ye-formaldehyde. Susa iziphambeko zephansi lendabuko, igumbi lokugezela, kuvulandi, ekhishini kungadilizwa, yonke indawo ingakuzwa ukuthungwa okufudumele okulethwe phansi ngokhuni kusuka onyaweni, ngemuva kwamashumi ezinkulungwane zokugoba okuqondile, bamba umzuzu wokuphindeka osezingeni elifanele, othambile futhi oguqukayo Izici zibuyisela kahle umuzwa wonyawo okhululekile wephansi, ngakho-ke kufanelekile futhi nakwezemidlalo njengembhede yezikhathi zemidlalo.
Inqubo yokwenza nokwenziwa kwehlukile
Ehlelweni lokwenza i-SPC flooring, i-mineral rock minerals yengezwa engxenyeni ye-nano polymer resin ingxubevange, ukuze ukungqubuzana kungazinamathele, akukho glue okudingekayo, futhi ukubumba okushisa okuphezulu okuncibilikayo nokushisayo kufezekisa ngempela 0 ngokusemthethweni. Isisekelo se-Rubber isitezi esenziwe ngerabha yemvelo, irabha elenziwe kanye nezinye izinto zezinto zokubumba.
I-SPC flooring inemibala eminingi ongakhetha kuyo, zombili izinkuni zemvelo kanye nokuthungwa kwezinkuni, kusuka kokujwayelekile ngokwejwayelekile kuya kwimfashini yesimanje, umbala ngamunye unengqondo Kunokukhethwa okuningi, futhi umbala wamabala ezitezi zerabha unzima. Ngenxa yokuthi injoloba inokubekwa okuqinile kombala, izitezi zenjoloba eziningi zinombala owodwa.
Umehluko ngesidingo semakethe nokugqokwa kokugqokwa
Iphansi le-SPC lixazulula inkinga yokuthi umkhiqizo kulula ukubola futhi uvuvukele ngemuva kokuthola umswakama ezindaweni ezimanzi nezinamanzi.Akunamanzi futhi kungavikeleki.Angasetshenziswa ezindaweni lapho imikhiqizo yokhuni yendabuko ingenakusetshenziswa. Ukusebenza kwezindleko kuphezulu, ngakho-ke kusetshenziswa kabanzi. Amandla emakethe makhulu. Ngenxa yenani eliphakeme, ukufakwa phansi kwenjoloba kusetshenziswa kuphela kwezinye izindawo eziphezulu, futhi ubukhulu bumincane.
Iphansi le-SPC lilula ngokuswakama futhi lilula futhi liyashesha ukufakwa; isitezi senjoloba sisinda futhi sidinga umzamo omkhulu ukufaka. Ngaphezu kwalokho, i-SPC floor ayidingi ukulungiswa nokulungiswa, okulula ukuyihlanza nokuyonga izindleko zokulungiswa nokulungiswa kwesikhathi. Indlela yokufaka isitezi senjoloba iqinile uma indlela ingalunganga, kuzovela ama-bubble futhi nezidingo zesisekelo se-level level zizoba zisebenza ngokuphelele, ngaphandle kwalokho iziphambeko zesisekelo zizokwandiswa. .
I-SPC floor VS floor floor Okuqukethwe okuhlobene